HTC One A9 को मूल्य अपमानजनक छ: 699 XNUMXeयूरो | Androidsis
HTC यो त्यस्तो कम्पनी हो जुन हामीलाई कहिल्यै अचम्म मान्दैन। खराब। ताइवानी निर्माताको टेलिफोनी विभाजन सबैभन्दा राम्रो क्षणको माध्यमबाट गुज्रिरहेको छैन तर HTC ले यसको अपमानजनक मूल्य निर्धारणको साथ गल्ती गर्न जारी राख्छ।
अन्तिम शिकार? अपेक्षित एचटीसी वन एक्सएनमक्स, प्रीमियम फिनिशको साथ एक मिड-रेन्ज फोन छ जससँग एचटीसी मजाक मूल्य: 699 XNUMXeयूरोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ। इमानदारीपूर्वक, कसले त्यो पैसा छोड्दैछ जब उही मूल्यको लागि तपाईले अझ धेरै उत्तम फोनहरू किन्न सक्नुहुन्छ?
HTC One A9 को मूल्य, अर्को निर्माता त्रुटि
एचटीसी यसको मूल्य पुष्टि गर्ने जिम्मामा रहेको छ, त्यसैले हामी धारणाहरूबारे होइन तर निर्माताको आधिकारिक मूल्यको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। अवश्य पनि, यदि तपाईंले डिसेम्बर १ भन्दा अघि एल कोर्टे ईन्ग्लिस मार्फत HTC One A9 अग्रिम राख्नुभयो भने, तिनीहरूले तपाईंलाई उल्लेखनीय भन्दा बढि बनाउँनेछन्। २%% कटौती, बाँकी 28 499eयूरो। यो अझै सम्मिलित भएको दायराका लागि यो धेरै ठूलो मूल्य हो, तर 699 XNUMXeयूरो पहिले नै रोकेट प्रक्षेपण गर्नका लागि छन्। मुख्यालयको दिशामा।
प्राविधिक रूपमा एचटीसी वन एaखराब फोन होइन:-इन्चको स्क्रिन कर्निंग गोरिल्ला ग्लास prot सुरक्षात्मक प्यानल, प्रोसेसरको साथ १9०० x 5० पिक्सेलको रिजोलुसनमा पुग्छ। Qualcomm Snapdragon 617 आठ कोर कोरसँग २ जीबी र्याम, १ GB जीबी आन्तरिक मेमोरी विस्तार योग्य माइक्रो एसडी स्लट, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, उच्च गुणको ध्वनि र १2मेगापिक्सेल क्यामेराको माध्यमबाट। मध्य दायरामा के अपेक्षित हुन्छ।
र हो, योसँग केही प्रिमियम समाप्तको अतिरिक्त वास्तवमै आकर्षक डिजाईन छ तर एचटीसी वन ए of को मूल्यले सबै क्षतिपूर्ति गर्दैन। २%% छुट भए पनि हैन। त्यहाँ हाल बजार र कम मूल्यमा धेरै राम्रो समाधानहरू छन्।
हामी संग पहिलो उदाहरण छ शक्तिशाली आदर 7, एक उपकरण जसले प्राविधिक रूपमा HTC One A9 लाई एक दुई जोडी ल्याप प्रदान गर्दछ, धातुको शरीर र 3499e यूरोको मूल्यको साथ। यद्यपि म तपाईलाई दशवटा राम्रा फोनहरुका लागि अरु धेरै उदाहरण दिन सक्छु जसको लागत कम छ, वा HTC One AXNUMX जस्तै छ।
सच्चाइ यो हो मलाई एचटीसी टोलीले के सोचिरहेको हो थाहा छैन उच्च-अन्त मूल्यमा एक मिड-रेंज फोन बजारमा सफल हुन गएको सोच्नको लागि। यो कसरी हुन सक्छ कि ताइवान निर्माताले महसुस गरिरहेको छैन कि यसको टेलिफोनी डिभिजनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यसको उत्पादनहरूको मूल्यहरू हो?
म डराउँछु एचटीसीको टेलिफोनीको समय सकियो। उसको भविष्य? प्रभावशाली आभासी वास्तविकता चश्मा HTC Vive, वास्तवमै चाखलाग्दो परियोजना जुन तपाईंलाई धेरै राम्रो फाइदाहरू दिन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » HTC » HTC One A9 स्पेन मा 699 XNUMX। लागत, यो खराब स्वाद मा एक मजाक छैन
गुगल प्ले पुस्तक अद्यावधिक राम्रो कमिकहरु पढ्न